Raw Lorcaserin HCL Powder (846589-98-8) Vagadziri - Phcoker
Raw Lorcaserin hydrochloride powder is serotonin 2C (5-HT2C) receptor agonist uye nemuromo inotungamirwa mishonga inosimudzira….
Raw Lorcaserin hydrochloride powder ndeye hydrochloride yakawanikwa nekuita kwe lorcaserin powder neyakaenzana nehydrochloric acid. Inoshandiswa semushonga unorwisa kufutisa. Lorcaserin hydrochloride ndeye 5HT2c receptor agonist inoratidzwa kuti ishandiswe muvakuru vane BMI -30, kana avo vane BMI -27 uye angangoita mamiriro ane huremu hwakadai sehypertension, rudzi rwechipiri chirwere cheshuga kana dyslipidemia. inokonzeresa kunzwa kwekuguta, uye inofungidzirwa kudzivirira kunaya kwechirwere chemoyo chevharvosi chinosanganisirwa nekumisikidza kwe2-HT5B receptors, iyo nzvimbo yehuropi inozivikanwa kuita basa rakakura mukugadzirisa nzara uye kudya kwekudya. Nekuita izvi zvinogamuchirwa, Lorcaserin hydrochloride poda inogona kudzora kushandiswa kwechikafu nekudzora chishuwo uye kuita kuti munhu anzwe kuguta kunyangwe mushure mekudya chikafu chidiki pane zvakajairwa. yakabvumidzwa nhasi neDFA mune yakasarudzika sarudzo mushure memakore maviri ekuongororwa.
Lorcaserin hydrochloride powder inoshanda nekudzora chishuwo - kunyanya nekumisikidza brain receptors kune serotonin, iyo neurotransmitter iyo inokonzeresa manzwiro ekugutsikana uye kugutsikana Kudya kwechikafu kunodzorwa ne satiety Center, iri mu ventromedial nucleus ye hypothalamus uye nzara nzvimbo iripo mune lateral hypothalamus. Zvinhu zvakasiyana siyana zvinobva kunzvimbo dzakakwirira uye maturakiti emudumbu zvinosangana mune arcuate nucleus, uko marudzi maviri emauroni anotonga kudya kunowanikwa. Kutanga, chikafu chinodya chinokurudzira chinogadzira mapuroteni ane hukama neagouti uye neuropeptide Y; uye chechipiri, chikafu chinodya inhibitory boka rine cocaine uye amphetamine inodzorwa zvinyorwa (CART) uye pro-opiomelanocortin (POMC) neurons. POMC ine 5-HT 2C receptors, iyo painomisikidzwa ikaburitsa alpha-melanocyte-inosimudzira mahormone (alfa-MSH) .Zvese zviri zviviri zvinodzivirira uye zvinokurudzira mauroni zvinowedzera mapurojekiti epasirosi mu hypothalamus. Paraventricular nucleus ine melanocyte 4 receptors (MC4R) iyo inotitadzisa kudya mune yekurapa doses lorcaserin hydrochloride powder inoita senge inosarudza 5-HT 2C agonist paPOMC neurons, inova iyo inokonzeresa kuburitsa alfa MSH. Kuenderera mberi alfa MSH inoshanda paMC4R mune paraventricular nucleus muiyo hypothalamus, zvichikonzera kudzikira mukuda. Mune supratherapeutic doses, lorcaserin hydrochlorider inoshandawo pa5-HT 2B uye 5-HT 2A receptors.
Lorcaserin HCL powder inouya mufomu yepiritsi uye inotorwa kazhinji 1-2 nguva pazuva, kana kana pasina chikafu. Lorcaserin inofanira kushandiswa pamwe chete neyakaderera koriori chikafu uye chirongwa chekurovedza muviri.
Iyo yakakurudzirwa dosi ye lorcaserin hcl powder ndeye 10 mg inotungamirwa nemuromo kaviri pazuva. Lorcaserin inogona kutorwa pasina hanya nezvekudya. Lorcaserin hcl inofanirwa kumiswa muvarwere vanokundikana kuwana kana 5% yekudzikira uremu nevhiki yegumi nembiri sezvo varwere ava vasingakwanise kuwana kurasikirwa kwehuremu zvine musoro nekuenderera mberi nekurapwa.
Lorcaserin Hcl poda inoshandiswa pakurapa kwekusingaperi uremu manejimendi mune vakuru vane muviri mashoma index (BMI) ye30 kana mukuru (akafutisa) sekuwedzera kune yakaderedzwa-koriori chikafu uye kurovedza muviri. Inotenderwawo kuti ishandiswe nevanhu vakuru vane BMI yemakumi maviri nemanomwe kana kupfuura (kuwandisa) uye vane hunhu hunenge hune hukama-hwakadai sekukwira kweropa (hypertension), kana cholesterol (dyslipidemia). Nekudaro, zvakare inogona kuve neimwe mhedzisiro. Sezvo pazasi: